Ukumangaliswa | June 2022
Imibuzo emithandathu eNkulu esiya kwisiqingatha sesibini sika'Loki '
Kunye neziqendu ezithathu eziza kudweliswa kuthotho lweMCU, iimfihlelo zisandula ukuphalala
Ukuntywila okunzulu kwiiwele zikaWanda Maximoff, uBilly noTommy
Ngamandla akhulayo kwaye ubuncinci bokuzimela, amawele yenye yezona zinto zingummangaliso ze-'WandaVision. 'Ukujonga emva kwimvelaphi yabo yokuhlekisa, nangona kunjalo, kunika iingcebiso ezimbalwa ezinokubakho.
Ukuphinda u-'Loki ': Ukujika ngokukhawuleza
Kwisiqendu esithatha indlela eya kumxholo oyintloko, uLoki ufunda ngakumbi ngeqabane lakhe elitsha-kunye 'nabazi zonke izinto,' i-Time-Keepers
'I-Falcon kunye ne-Soldier yasebusika' ayizange ithathe i-Protagonist yayo ngokukhawuleza
UMarvel Cinematic Universe wayefuna ukuba uSam Wilson abe ngu-Captain America, kodwa ngaba u-'The Falcon kunye ne-Soldier yase-Winter 'bakholelwa ukuba wayefanele ukuba?
UCaptain America's Strange, Ukufuna ixesha elikhanyayo lokuKhanyisela ngokwesondo
USteve Rogers udlulisa ikhaka kuSam 'Falcon' Wilson kunye neBucky Barnes, kodwa ngaphambi kokuba enze oko, masikhumbule uhambo lwakhe olungaqhelekanga, oluthathe amashumi eminyaka lokulahla ubuntombi bakhe
I-Captain America entsha iya kulwela into eyahlukileyo
Ekupheleni 'kwe Falcon kunye nejoni lasebusika,' uSam Wilson wagqiba wathi ibango uSteve Rogers alishiyela yena. Kodwa oko akuthethi ukuba uyakulibala ukungqubana kwangaphakathi awayejamelene nako phambi kokuthatha isigqibo sokuthatha ingubo.
'I-Falcon kunye ne-Soldier yasebusika' Ukuphindaphinda: USam uthatha ingubo
USam Wilson ekugqibeleni ulwa nelifa elinzima phambi komdlalo wokugqibela wokugqibela kunye noKarli Morgenthau
Isikhokelo kuPietro Maximoff (e)
Emva kolu thotho lwamva nje, kukho itoni yemibuzo ekufuneka ibuzwe
Ngaphambi koluhlu lwaKhe lweDisney, uphinda uhambo lukaLoki lweMCU
Ngaphandle kwabaphindezeli, akukho mntu ubenempembelelo enkulu kwi-MCU njengoThixo wobubi. Ngoku ekubeni efumana ukukhanya kwakhe, makhe sijonge ngasemva kuyo yonke le mayhem ebeyinxalenye yayo.
ILoki eyahlukileyo, ngexesha elahlukileyo, kwiNdawo eyahlukileyo
Uthotho oluzayo lweDisney + luphawula ukubuya kukaThixo Wobubi, kodwa kunye nokuhamba kumgaqo wexesha wesiko njengoko iMCU iqhubeka ngokujula nangakumbi kuninzi
UDaniel Brühl ulapha ukuze abonise uMboniso
Emva kokubonakaliswa komdlali weBaron Helmut Zemo ufake amandla angalindelekanga kwi-'Falcon kunye ne-Soldier yaseBusika, 'lixesha lokumqonda njengomnye wabadlali baseHollywood abaxatyiswa kakhulu
I-'Loki 'yeNkulumbuso yokuBuyisa: Ixesha alikho kwicala lakhe
Isiqendu sokuqala kuthotho sazisa ngeGunya lokwahluka kwexesha kwaye siqale uhambo lokuzifumanisa ngokwethu okunokuba nefuthe elikhulu kwindalo iphela yeMarvel Cinematic
Yintoni eza ngokulandelayo kwi-Scarlet Witch?
Ugqirha Strange kunye neendawo ezahlukeneyo zilindile
'I-Falcon kunye ne-Soldier yasebusika' iNkulumbuso: Ubomi Emva kweBlip
Kwisavenge sokuqala sothotho lwamva nje lwe-MCU, uSam Wilson kunye neBucky Barnes bodwa, banamathele, kwaye bayasokola ukufikelela kwilizwe elisengxakini emva kokoyiswa kukaThanos
Eyona nto ikhululekileyo iphela isiya kwisiGqibo se 'WandaVision'
Isiqendu sokugqibela sichaze i-Wanda hex, kodwa kusekho imibuzo emininzi efuna ukuphendulwa
Ngubani uJohn Walker?
I-superpatriot inokubonakala ngathi lijoni elifanelekileyo ngoku, kodwa imvelaphi yakhe yencwadi ehlekisayo inzima kakhulu
Ukusukela ekuqalekeni, uTom Hiddleston kunye noLoki bebelingana ngokugqibeleleyo
U-Hiddleston ekuqaleni waphicothwa ukuba abe ngu-Thor. Indima agqibe ngayo endaweni yakhe yayilelokuba wayezalelwe ukuba ayidlale.
Uphando lokungena 'Loki'
Kungekudala, uThixo wobubi (okanye ubuncinci ingxelo yakhe) uza kubuya kwelabafileyo, egxuphuleka kumaxesha abekiweyo. Akukho xesha lingcono lokujonga ubushushu beMCU.
Ngaba umahluko 'weLoki' Nokuba uyiLoki?
Sidibene nabani ekupheleni kwesiqendu sesibini sika'Loki '? Impendulo isenokungabi lula.
'WandaVision' Isiqendu se-8 sokuphindaphinda: Ukuzalwa kukaWestview Anomaly
Kwisiqendu sokugqibela sexesha, u-Agatha unyanzela uWanda ukuba abuye nelona xesha linzima ebomini bakhe-ekugqibeleni etyhila iinkcukacha ezibalulekileyo malunga nebali lemvelaphi yeqhawe
Ngaba idemarco murray iya kudlala
iingoma ezilishumi eziphezulu zeedisney
dave chappelle emmett kude
indlela yokuphuma zonke iziphelo